Vaovao - Fampiharana bobongolo vita amin'ny silikaly ranoka LSR
Ny gel silika an-tsokosoko dia nohafohezina ho LSR, izay vokatra azo tian'ny mpanjifa sy ny mpanamboatra azy. Ny gel silicaika ranoka dia vita amin'ny vokatra gel silika. Izy io dia manana elastika tsara, tsy tantera-drano ary fanoherana ny hamandoana, ary mahatohitra asidra, alkaly ary akora simika hafa. Ampiasaina matetika hanoloana ny vokatra plastika isan'andro.
Ny teknolojia famolavolana silika vita amin'ny silika vita amin'ny rano (LIM) dia fomba famolavolana silika vita amin'ny silika vaovao sy mahomby namboarina tamin'ny faran'ny taona 1970. Izy io dia manambatra fingotra silipo ranon-javatra tena tsara fampiasa miaraka amin'ny fitaovana afaka mamolavola ny tsindrona tsindrona tanteraka sy azo antoka. Ny karazana vainga vita amin'ny silika vita amin'ny silika vaovao ary ny teknolojia fanodinana dia mitaky singa roa ihany (izay azo atao koa ny mampiditra singa fanampiny toy ny fampifangaroana loko) ao anatin'ny fitaovana, ary mandeha ho azy ny fizotran'ny famahanana, ny fandrefesana, ny fampifangaroana amin'ny famolahana. Ity haitao fanodinana ity dia afaka manatratra ny tanjon'ny fanamorana ny fizotrany, ny fanafohezana ny fotoana fanodinana, ny fitsitsiana fitaovana ary ny fanatsarana ny fahombiazany. Ary tsy misy fako amin'ny faran'ny famokarana, izay mahasoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ny rafitra famolavolana tsindrona iray manontolo dia mizara ho ireto manaraka ireto:
Ny singa voalohany dia singa fandrefesana sy famahanana, izay mandrefy tsara ny singa roa amin'ny silipo silipo ranoka mivantana avy amin'ny barika famonosana mankany amin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny takelaka faneriterena hydraulic;
Ny singa faharoa dia singa mampifangaro. Ireo singa roa miditra amin'ny rafitra dia mifangaro tanteraka amin'ny alàlan'ny mixer static, ary tsy misy miboiboika entina ao anaty rafitra;
Ny singa fahatelo dia ny singa famolavolana tsindrona. Ny fitaovana vita amin'ny silipo mifangaro mifangaro dia atsindrona be dia be ao anaty lasitra amin'ny alàlan'ny tsindrona tsindrona, ary zaraina mitovy amin'ny lavaka tsirairay avy, ary avy eo nopetahana volo. Ny fizotrany manontolo dia mandeha ho azy tanteraka, ary tsy misy fanaraha-maso an-tanana azo tanterahina aorian'ny fametrahana ny masontsivana hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana.
Ireo singa mametra ny fahombiazan'ny famokarana LSR
Manana tombony be dia be ny LSR, tokony hanana vinavina malalaka be eo amin'ny tsena izy. Fa raha ny teknolojia mpanamboatra ankehitriny, LSR dia tsy dia sariaka loatra, izay hita ao amin'ny fameperana ny fahombiazan'ny famokarana. Mikasika ny fahombiazan'ny famokarana, azonao atao ny manondro ity sary manaraka ity. Ny singa A dia misy ny catalyst ary ny singa B dia misy ny agents inter-link. Rehefa avy afangaro amin'ny 1: 1 dia atsofoka ao anaty lasitra amin'ny alàlan'ny visy manokana ary ahodinkodina ho elastomer amin'ny hafanana ambony, avy eo sitrana amin'ny lasitra. mamorona.
Ny sakan-tavoahangy lehibe atrehana amin'izao fotoana izao dia ahitana:
1. Ny hafainganam-pandehan'ny fanasitranana ilay fitaovana dia 5-8S / mm, izay mametra ny famokarana bobongolo tsindrona amin'ny hafainganam-pandeha haingana.
2. Ny silikôra ranon-javatra dia misy fluidity be alohan'ny fanasitranana, ary mora ny mamokatra tselatra mandritra ny dingan'ny famolavolana tsindrona, izay mitaky fitakiana avo lenta amin'ny fahamendrehan'ny bobongolo sy ny fahamarinan'ny milina famolahana tsindrona.
3. Ny vokatra silicone vita amin'ny rano dia malefaka, ary ny vokatra dia hitombo mandritra ny fizotry ny fanasitranana, ary hihena ny habetsahan'ny aorian'ny famatsiana, izay miteraka fahasarotana lehibe amin'ny fametrahana ny vokatra mandritra ny famokarana mandeha ho azy.